Chọpụta otu esi elekọta ahụike ọgụgụ isi gị kwa ụbọchị | Bezzia
Otu esi elekọta ahụike uche gị kwa ụbọchị
Susana Garcia | 02/05/2021 18:00 | Emelitere ka 28/04/2021 09:49 | Psychology, Psychology na di na nwunye
La ọgụgụ isi bụ echiche sara mbara nke ukwuu Enweghi ike ikpuchi gị naanị otu ihe mana ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla mara mgbe ahụ dị gị mma na mgbe ị na-adịghị. Ilekọta ahụ ike nke uche anyị dị oke mkpa dị ka ilekọta anụ ahụ anyị anya, ebe ha abụọ nwere njikọ chiri anya, ị nweghị ike ịnwe nke ọzọ. Ya mere, anyị ga-ahụ ụfọdụ ndụmọdụ iji mụta otu esi elekọta ahụike ọgụgụ isi kwa ụbọchị.
Anyị Omume na ndụ anyị na-adị kwa ụbọchị na-emetụta etu anyị si enweta onwe anyị n'uche. A ghaghị ilebara ahụike uche anya kwa ụbọchị iji wee nwee nguzozi nke na-adị anyị mma. Ọ bụ ya mere e ji nwee ọtụtụ ihe ga-enyere anyị aka ịna-agbasikwu ike, meekwa ka ahụ́ gbasie anyị ike.
1 Ahụ ike
2 Na-elekọta ahụ gị
3 Na-elekọta ndị enyi gị
4 Oge ezumike
5 Mee ihe masịrị gị kwa ụbọchị
6 Nhazi na mkpali
Iri nri dị mma bụ otu ihe dị mkpa anyị nwere iji nwee ahụ ike. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ka ọ, ahụ ike ahụ na-emetụta uche anyị ọtụtụ oge yana nke ọzọ. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji lekọta onwe anyị anya ma n’ime anyị. Ọ dị ezigbo mkpa rie nke ọma iji nwee ahụ ike na ilekọta ahụ ogologo oge. The nri ga-guzozie eguzozie, na ihe nile dị iche iche nke nri, na-ezere jupụta abụba na sugars nwere ike imebi ahụ ike anyị. Ọ bụrụ na anyị na-eri nke ọma anyị ga-enwe mmekọrịta dị mma na nri ma anyị ga-ezere ibubiga oke oke na nsogbu ahụike niile nri na-adịghị mma nwere ike iweta. Rie nkpuru osisi na inine kwa ubochi ma drinkua otutu mmiri, i gha ahu ima nma n’ahu gi n’uzo.
Na-elekọta ahụ gị
Ilekọta ahụ bụ akụkụ ọzọ dị mkpa. Nri dị ezigbo mkpa, kamakwa ịme egwuregwu iji nwee ike ịga ije, nwata na ahụike. Na egwuregwu na-ewusi ahụ ike na ọkpụkpụ, na-ebelata usoro ịka nká ma na-enyere anyị aka agagharị. Ọ bụghị naanị na ọ na-enyere anyị aka na anụ ahụ, kamakwa ọ na-enyere aka ịzụlite uche ma mee ka ọ dịkwuo mma, ebe ọ bụ na ịme egwuregwu na-enyere anyị aka ịhapụ endorphins na homonụ ndị ọzọ na-eme ka sistemu anyị dum dịkwuo mma, gụnyere usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ.
Na-elekọta ndị enyi gị
Inwe ndi enyi bu ihe di nkpa n’inwe obi di nma. Ndị enyi bụ ezinụlọ ị họọrọ ma ọ bụrụ na ha dị mma anyị ga-enwe nkwado na ha mgbe niile. Mana ọbụbụenyi ekwesịghị iji maka egwu, ha ga-elekọta ha anya. Soro onye ọ bụla nyere gị ihe na ndị dị gị mkpa nọrọ. Ma ị̀ bụ onye ọha na eze ma ọ bụ na ọbụghị, ọ dị mkpa inwe ezigbo ọbụbụenyi.
N'oge a, anyị na-elekwasị anya na ọrụ niile anyị ga-ebu n'ebughị n'uche oge ezumike. Ọtụtụ mgbe anyị na-echefu nwee ụfọdụ oge kwa ụbọchị maka onwe anyị, izu ike ma ọ bụ ime ihe masịrị anyị. Ya mere, nke ahụ kwesịrị ịdị nsọ. Kwa ụbọchị, ọ ga-ezu ike n'ihi na ọ bụrụ na anyị anaghị elekọta onwe anyị, anyị agaghị enwe ike ịlekọta ndị ọzọ ma ọ bụ bụrụ ndị isi ahụike.
Mee ihe masịrị gị kwa ụbọchị
Anyị kwesịrị ime ihe masịrị anyị kwa ụbọchị. Nke a bụ akụkụ dị oke mkpa n'ihi na ihe omume ntụrụndụ na oge ezumike na-eme ka nrụgide na-agbada ma ọ na-adị anyị mma. Ọ bụrụ na oge gafere gị ngwa ngwa ịme ihe, ọ bụ ya n'ezie ị masịrị ya ma ị na-anụ ụtọ ya. Ọ bụ ya mere ị ga-eji mee ụdị ihe a kwa ụbọchị.
Nhazi na mkpali
Ọ dị mkpa na ndụ anyị dị hazie ma na anyị nwere ebumnuche na mkpali. Ọ dị mfe inwe ahụ iru ala ma nwee ahụ ike ma ọ bụrụ na anyị nwere ndụ ahaziri ahazi, ebe ọ bụ na n'ụzọ a anyị nwekwara ike ime ka oge anyị kachasị mma. N'aka nke ọzọ, ọ dị mkpa inwe mkpali, ebe ha na-enyere anyị aka ibili kwa ụbọchị ma nwee ume iji mezuo ebumnuche anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Otu esi elekọta ahụike uche gị kwa ụbọchị
Nghazi ntutu maka ntutu dị mma